Taunggyi Times (တောငျကွီးတိုငျးမျ): April 2011
ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဆီဆိုင်မြို့နယ်အတွင်း လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့် နေအိမ်အလုံး ၄၀ ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့
Thursday, 28 April 2011 | Eleven Media Group
ဧပြီလ ၂၃ ရက် နေ့က ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်းဆီဆိုင်မြို့နယ် ဆိုက်ခေါင်တွင် လေပြင်းတိုက်ခတ်သည့်အတွက် နေအိမ်အလုံး ၄၀ ထိခိုက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
By Kanbawza Win | 22 April 2011 | Friday
As I mused over the gospel song of “In His Time, He makes all things beautiful in His time.” nostalgia caught me up at the time of the Burmese New Year, Thingyan. The people of Burma has been despaired about the possibility of real change now that the electoral coup has been complete while the International Crisis Group endeavours to pave the graceful exists of Than Shwe and who knows may be lavished by the Burmese strong man via their proxy cooperate as he knows very well that ICG has to dance to the pull of their corporate patrons.
By Kanbawza Win | 13 April 2011 | Wednesday
The people of Burma especially the middle age person who had gone through the Burmese Socialist days clearly understands the psyche and rationale of the Burmese Generals who construe themselves that they are the only ones, that really love the country while the rest are parasites that does not harbourapale of patriotism in them and hence it is their bounden historical duty to take power into their own hands. Leading Burmese intelligentsia like Dr Zarni,aResearch Fellow at the London School of Economics and U Aung Zaw the chief editor of the Irrawaddy who all had gone through the Ne Win Era are convinced that this so called discipline democracy and the new government by the Junta is butahoax.
လွှတ်တော်၏ အတည်ပြုချက် ရယူရန် မလိုဘဲ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသည့် စာချုပ်နှင့်သဘောတူညီချက် ၃၀ ခု ရှိကြောင်း သိရ
ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်၏ အတည်ပြုချက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသည့် စာချုပ်နှင့် သဘောတူညီချက်များမှာ ခုနစ်ခုရှိပြီး လွှတ်တော်၏ အတည်ပြုချက် ရယူရန် မလိုဘဲ နိုင်ငံတော်သမ္မတက ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသည့် စာချုပ်များနှင့် သဘောတူညီချက် များမှာ ၃၀ ခုရှိကြောင်း ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေ၏ နောက်ဆက်တွဲ ဇယား(၁)နှင့်(၂)အရ သိရှိရသည်။
By BA KAUNG |Wednesday, April 6, 2011 | Irrawaddy
CHUMPHON, THAILAND—Burmese people living inafishing village in Thailand's southern province of Chumphon have accused the local police of severe repression.